Plex ဆိုတာဘာလဲ၊ Smart TV တွေမှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ မိုဘိုင်းဖိုရမ်
ဒန်နီရယ် Terrasa | 25/09/2021 12:00 | အစီအစဉ်များ
သင်ကြားသိလျှင် Plex ၎င်းကို၎င်း၏အသုံးပြုသူများအားပေးနိုင်သောအရာအားလုံး၊ ၎င်းသည်သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုသေချာစေခဲ့သည်။ ဒီ post မှာငါတို့ Plex ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြမယ် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်မရ။ အသေးစိတ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဖြေရှင်းနည်းအချို့နှင့်၎င်းမှအကောင်းဆုံးကိုရယူပါ။
Plex သည်ပြီးပြည့်စုံသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီမာလ်တီမီဒီယာလွှင့်ဝန်ဆောင်မှု။ ၎င်းအားကျေးဇူးတင်ပါ၊ ၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့၏တွင်သိုလှောင်ရန်မလိုဘဲအခြားကိရိယာများမှအကြောင်းအရာများကိုကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဥပမာအားဖြင့်ရုပ်ရှင်၊ တေးဂီတ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တင်ထားသောအခြားမည်သည့်အကြောင်းအရာမဆိုစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးတွင်ကစားနိုင်သည်။
Plex ပရောဂျက်သည် ၂၀၁၀ တွင်ကိုယ်ပိုင်ပဏာမခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မူလစိတ်ကူးသည်အမေရိကန် startup မှဖြစ်သည် Plex, Inc မှမရ။ ဤကုမ္ပဏီသည် Plex Media Server နှင့် app ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တာဝန်ယူသည်။ ဤဆော့ဝဲအားလုံးကို "Plex" ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။
1 Plex ဆိုတာဘာလဲ။
2 Plex ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ
3 Plex ကိုအခြားစက်များ (Smart TV) တွင်သုံးပါ။
3.1 Plex ကို Smart TV နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲ
4 ငါ့အိမ်မှာ Smart TV မရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ။
Plex သည်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာကိုကြီးကျယ်သောမာလ်တီမီဒီယာစင်တာတစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းပါ။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်တွဲများအတွင်း၌ထားရှိခဲ့သောမာတီမီဒီယာဖိုင်လ်ဖိုင်များအားလုံးကိုမှတ်မိရန်နှင့်ဤနည်းအတိုင်းစုစည်းရန်ဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကဲ့သို့အရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပါ Netflix နဲ့.
အင်း၊ စိတ်ကူးကအတူတူဘဲ၊ အတော်လေးပုံကြီးချဲ့ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Netflix ကိုအတုယူဖို့ဒါမှမဟုတ်ယှဉ်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ Netflix နှင့်နေစဉ်၎င်းသည် Plex ကို သုံး၍ ၎င်းအား၎င်း၏ဆာဗာများပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုဖွင့်ပေးသောပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒါကကြီးမားတဲ့အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ယခင်ရွေးချယ်ထားသောကွန်ပျူတာရှိဖိုင်တွဲမှပြုလုပ်သည် "Root ဖိုင်တွဲ" သိုလှောင်မှုကန့်သတ်ချက်လား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ hard disk ၏စွမ်းရည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသောအရာဖြစ်သည်။
Plex ၏အကောင်းဆုံးအရာသည်၎င်းဖြစ်သည် နာမည်ကြီးအသံနှင့်ဗီဒီယိုပုံစံအားလုံးနီးပါးနှင့်လိုက်ဖက်သည်မရ။ အရေးမပါတာကအကြောင်းအရာတွေကိုအကြောင်းအရာအလိုက်၊ အမျိုးအစားအလိုက်စီစဉ်ဖို့ငါတို့ကိုကမ်းလှမ်းတာဖြစ်နိုင်ခြေနည်းတာမဟုတ်ဘူး။ အခြားအွန်လိုင်းချန်နယ်များနှင့်အဝေးမှချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းသည်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။
ပိုမိုက်သော Plex အင်္ဂါရပ်များ - ဆော့ဝဲကိုတပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်၊ ၎င်းကိုမည်သည့်ကိရိယာမှမဆိုရယူနိုင်သည်မရ။ သင်လုပ်ရန်မှာအားလုံးသော application ၏ install လုပ်ရန်ဖြစ်သည် Plex မီဒီယာဆာဗာ မာတီမီဒီယာဖိုင်လ်များလက်ခံကျင်းပသောကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရှိပြီးပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုနေစဉ်တွင်၎င်းသည်တက်ကြွနေကြောင်းသေချာပါစေ။
၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည် Plex လိုင်းပလက်ဖောင်းအားလုံးအတွက်သီးခြားဗားရှင်းများပါ ၀ င်သော၊ Android, iOS, GNU / Linux, macOS, Windows, SmartTVChromecast နှင့် console များ၊ PlayStation နှင့် Xbox ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗွီဒီယိုများကိုမည်သည့်နေရာ၌မဆိုကြည့်နိုင်သည်။
Plex ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ
Plex ကိုသုံးရန်ပထမခြေလှမ်းသည် app ကို download လုပ်ရန်ဖြစ်သည် Plex မီဒီယာဆာဗာ မှ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မရ။ သင်၎င်းကိုရယူပြီးခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ « Download »မရ။ ဤနောက်တွင်၊ သင် operating system တစ်ခုစီအတွက်သင့်လျော်သော version ကိုရွေးချယ်ရန် menu တစ်ခုပြလိမ့်မည်။ ငါတို့ကငါတို့ပဲရွေးရမယ်။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးနောက်၊ တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မစမီကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့အပလီကေးရှင်းကိုထည့်သွင်းလိုသောမည်သည့်ဖိုင်တွဲကိုရွေးပါ welcome page တွင် ဤအတွက်သင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ "ရွေးစရာများ" ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာရှိ ဦး တည်ရာဖိုင်တွဲကိုရွေးပါ။ ဤအရာကိုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ "ထည့်သွင်းပါ" နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသောအခါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ "ပစ်" လျှောက်လွှာကိုစတင်ရန် ထို့နောက် browser တစ်ခုတွင်စာမျက်နှာတစ်ခုဖွင့်လိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် username တစ်ခု၊ ဆက်စပ်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စကားဝှက်တစ်ခုရိုက်ထည့်ပြီးမှတ်ပုံတင်ရမည်။
el en control panel ကို အဓိကကငါတို့ tab ကိုအရင်သွားပါ "နာမည်"၊ ငါတို့ကငါတို့ Plex server ရဲ့နာမည်ကိုရေးမယ့် menu တစ်ခုကို access လုပ်တယ်။ ဒီနောက်မှာငါတို့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိမ့်မယ် "နောက်တစ်ခု" "မီဒီယာစာကြည့်တိုက်" သို့သွားရန်။ ပုံသေအားဖြင့်ပုံနှစ်ပုံသာပေါ်လာနိုင်သော်လည်းဓာတ်ပုံများနှင့်တေးဂီတများကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သလောက်ရွေးချယ်နိုင်သည် "စာကြည့်တိုက်ထည့်ပါ" စာကြည့်တိုက်ပုံစံတွင်မြင်ကွင်းသည်အကြောင်းအရာများကိုအမျိုးအစား (အမျိုးအစား၊ ခေါင်းစဉ်၊ နှစ်စသည်) ကိုကြည့်ရှုရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်သည်။
Plex ကိုအခြားစက်များ (Smart TV) တွင်သုံးပါ။
၎င်းသည် Plex အားဤကဲ့သို့သောစိတ်ဝင်စားစရာအရင်းအမြစ်ကိုဖြစ်စေသောဤအင်္ဂါရပ်အတိအကျဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတက်ဘလက်များ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်အခြားကိရိယာများတွင်သုံးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့တစ် ဦး စီ၌ပြုလုပ်သောနည်းလမ်းသည်တစ်ခုစီ၏ကွဲပြားချက်များနှင့်တူညီသည်။ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည် Plex အက်ပလီကေးရှင်းကို download လုပ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ server သို့ချိတ်ဆက်ပေးပါသည်။
Plex ကို Smart TV နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲ
လုပ်ငန်းစဉ်သည်တက်ဘလက်များသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းများကဲ့သို့အခြားကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လက်တွေ့ကျသည်။ ကွဲပြားမှုအနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ ဆောင်ရွက်ရန် Plex နှင့် Smart TV အကြားဆက်သွယ်မှု သင်ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်နှစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
စတင်ရန်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Smart TV ကိုရယူပါapp store သို့သွားပါ Plex အက်ပလီကေးရှင်းကိုရှာပါမရ။ ၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်သင်အလိုအလျောက်စာကြည့်တိုက်တွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
ထိုအခါသင်သည်လုပ်ဖို့ရှိသည် စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပါ (သင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှု၏အကောင့်နှင့် ၀ င်ရန်မ ၀ င်မီဆာဗာကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့အတူတူ) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အထောက်အထားများကိုရိုက်ထည့်ပါ။ username နှင့် password ကို.
ဒါကအဲဒါပဲရှိတယ်။ ဤနောက်တွင်ငါတို့သည် Plex အတွင်း၌ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ smart TV မှသင်ပေးသောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုမြင်နိုင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ server ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာများကိုရယူရန်သင်၏ရွေးချယ်မှုသို့သွားရပါမည် "+ နောက်ထပ်".
လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းသော်လည်း၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံပြဿနာအချို့ကိုတင်ပြနိုင်သည်။ အဖြစ်များဆုံးတစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်သည့်အခါဖြစ်သည် Plex သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာများကိုမရှာဖွေပါမရ။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်လွယ်ကူသောကိစ္စဖြစ်သည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ငါတို့က web service ကိုအရင်သွားပြီးငါတို့ကြည့်လို့မရတဲ့အကြောင်းအရာဖိုင်တွဲကိုရိုက်ထည့်လိမ့်မယ်။ မေးခွန်းဖိုင်တွဲ၌ရှိသောအစက်သုံးလုံး၏သင်္ကေတကိုကျွန်ုပ်တို့ကလစ်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ် ၀ င်စားသောသူများအပါအ ၀ င်ရွေးချယ်စရာများကိုအောက်တွင်ပြထားသည်။ "စာကြည့်တိုက်၌ဖိုင်များကိုရှာပါ"မရ။ ဤအရာဖြင့်သာ Plex သည်၎င်း၏နောက်ဆုံးအဆင့်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုပြသပြီး local folder ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်တွန်းအားပေးလိမ့်မည်။
နောက်ထပ်အဖြစ်များတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ ဗီဒီယိုများကိုအလိုအလျောက်ထောက်လှမ်း။ မရပါမရ။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းသည်ရိုးရှင်းသည်။
ထဲမှာ ကို web version ကို၊ သင်ဝင်ရပါမည် ဖိုငျတှဲ ဗီဒီယိုကိုလက်ခံကျင်းပသောနေရာတွင်၎င်းကိုနှိပ်ပါ ခဲတံအိုင်ကွန် ငါတို့က mouse cursor ကိုအပေါ်ကိုတင်တဲ့အခါအဲဒါပေါ်လာတယ်။ အဲဒီ့ကနေပြီးဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်အားလုံးကိုတည်းဖြတ်နိုင်တယ်။
ငါတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကအဲဒါပဲ "နံရံကပ်ကြော်ငြာ"ဖော်ထုတ်သောပုံပေါ်လာသည်။ အဖုံးကိုပြောင်းရန်ရရှိနိုင်သည့်အတိုင်းပေါ်လာစေရန်၎င်းကိုဆွဲယူပါ။
၏ထို option ရှိပါတယ် အကြောင်းအရာမျှဝေပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မာလ်တီမီဒီယာဆာဗာ၏ ဤနည်းဖြင့်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် Smart TV မှကျွန်ုပ်တို့၏ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်နိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ငါတို့က web version ကိုသုံးပြီးဒီအဆင့်တွေအတိုင်းလုပ်ရမယ်။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့ကိုနှိပ်ပါ အိုင်ကွန်သုံးမှတ် ငါတို့သည် option ကိုရွေးလိမ့်မည် "မျှဝေပါ".
ပြီးရင်မင်းလုပ်စရာရှိတာအားလုံးကိုမေးပါ Plex တွင်သုံးသောအီးမေးလ် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများအတွက် username, ဒီ option ထဲမှာသူတို့ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ထို့ကြောင့်မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ပြီးနောက် (၎င်းသည်အကြောင်းအရာပမာဏနှင့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်လိမ့်မည်) ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာနှင့်ယခင်ရွေးချယ်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုအလိုအလျောက်ရယူနိုင်လိမ့်မည်။
ငါ့အိမ်မှာ Smart TV မရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ။
လူတိုင်းအိမ်မှာစမတ်တီဗွီမရှိပေမယ့် Plex ပါဝင်မှုကိုအခြားကိရိယာများနှင့်မီဒီယာများတွင်ခံစားရန်အတားအဆီးဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ တစ်နေ့တာ၏အဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်များပြားသောပုံစံ ၀ န်ဆောင်မှုအကြောင်းပြောနေကြသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင်ဖြစ်နိုင်ချေများစွာနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအလားအလာများကိုဖြစ်စေသည်။
ဒါဆိုရင်မင်းရဲ့စိတ်ကူးကဘာလဲ သင်၏အိမ် TV ၌ Plex ရှိသည်ဒါပေမယ့်မင်းမှာစမတ်တီဗီမရှိဘူး၊ ဒါတွေရှိတယ် အခြားနည်းလမ်း:
Google TV နှင့် Chromecast
အချုပ်အားဖြင့် Plex ကိုပြီးပြည့်စုံသော tool တစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်နိုင်သည် ငါတို့အိမ်မှာ Netflix ရှိတယ်မရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာအားလုံးကိုစုံလင်စွာ စုစည်း၍ ခွဲခြားထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်ခန်းတွင်သက်တောင့်သက်သာခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စမတ်တီဗီမှတဆင့် (သို့) အထက်ဖော်ပြပါအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အစီအစဉ်များ » Plex ဆိုတာဘာလဲ၊ Smart TV တွေမှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ